Mareykanka oo ku dhawaaqay inuu kordhinayo dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. – XAMAR POST
Mareykanka oo ku dhawaaqay inuu kordhinayo dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab.
By Zakariye iiman On Feb 8, 2019
Taliyaha ugu sareeyo ciidamada mareykanka ee hawlgalada afrika Thomas Waldhauser, ayaa sheegay in aysan marna hakin doonin weerarada dhanka cirka ah ay ku qaadaan dagaalayaasha al-Shabaab.
Ciidamada mareykanka way sii wadi doonaan iyagoo kaa shanaya ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa Amisom dagaalka ay kula jiraan al-Shabaab ayuu hadlkiisa sii raaciyay taliyaha ugu sareeyo ciidamada mareykanka ee hawlgalka Africom.
Mr Thomas ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu laqaatay gudiga Senetarada mareykanka u qaabilsan difaaca isagoona u sheegay in weerarada dhanka cirka ah ee al-Shabaab ku qaadaan aysan ka dhigneen in ay ka adkaadeen lkn ay tahay in ciidamada qaranka Soomaaliyeed laga caawiyo sidii ay masuuliyada amaabka ula wareegi lahaayeen.
Mareykanka ayaa sanadihii ugu danbeeyay kordhiyay weerarda dhanka cirka ah ee al-Shabaab uu ku baacsado isagoona sanadii 2017’dii fuliyay 35 weerar halka sanadkii xigay ee 2018 uu gaystay 47 weerar sanadkan haatan
Qof shacab ah oo maanta lagu dilay Muqdisho
Cabsi soo wajahday gaadiidka Xamuulka ee isticmaala duleedka Degmada Afgooye